ဗကသ ဥက္ကဋ္ဌများ စာရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ (ဗကသ) အဖွဲ့ကို ၁၉၃၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဂျူဗလီဟော၌ ကျင်းပခဲ့သည့် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ အစည်းအဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ စတင်တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ဗကသ (ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ All Burma Student's Union) သည် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းတွင် လွန်စွာအရေးပါလှသည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော စကားရည်လုပွဲတွင် ၁၉၃၅ - ၁၉၃၆ တကသဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်၊ သဘာပတိလည်းဖြစ်သူ ဦးနုက ထိုစဉ်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီး Mr. D.J. Sloss သည် ကျောင်းသားများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေကြောင်း ကျောင်းသားများ ကျွန်စိတ်မွေးမြူမှုနှင့် ကြောက်စိတ်များကို ပယ်ဖျောက်ပစ်သင့်ကြောင်း စသဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။ ၁၉၃၅-၃၆ တကသ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌမှာ ဦးရာရှစ်ဖြစ်ပြီး ဦးအောင်ဆန်းမှာ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာဖြစ်သည်။
တကသ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနု၏ တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်များအပေါ် ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများကြောင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားထုအကြား မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်များ ရှင်သန်ထက်မြက်လာခဲ့သည်။ ထိုစဉ်အတွင်း ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလထုတ် အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၅)၊ အမှတ် (၁) တွင် ယမမင်း (Yamamin) ကလောင်အမည်ဖြင့် ရေးသားထားသော ငရဲခွေးကြီး လွတ်နေသည် (Hell Hound at Large) အမည်ရှိ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တို့က ၎င်းတို့အား ပုတ်ခတ်ရေးသားထားသောဆောင်းပါးဖြစ်သည်ဟုဆိုကာ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ ဦးအောင်ဆန်းကို ဖြေရှင်းချက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဦးအောင်ဆန်းက ဆောင်းပါးရှင်ကျောင်းသား၏အမည်မှာ ဦးညိုမြ (ဝါ) ဦးသိန်းတင် (တကသ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ) ဟု သိသော်လည်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ဦးအောင်ဆန်းအား တက္ကသိုလ်မှ ထုတ်ပယ်ရန် အာဏာပိုင်များက စီစဉ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအတောအတွင်း ဦးနုကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီး Mr. Sloss က ကျောင်းမှထုတ်ပယ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ခဲ့သည်။ ဦးနုကျောင်းထုတ်ခံရခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျောင်းအုပ်ကြီး Mr. Sloss အား ဦးကျော်ငြိမ်းက သွားရောက်တွေ့ဆုံစေ့စပ်ခဲ့သည်။ ဦးနုအား ကျောင်းထုတ်ခဲ့သည့်အတွက် တကသ အမှုဆောင်အစည်းအဝေးမှ သပိတ်မှောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားထုအတွင်း မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပြည်လုံးကျွတ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသပိတ်ကို ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၇၀ဝ ကျော်ဖြင့် စတင်လိုက်ကြသည်။ သပိတ်မှောက်ကောင်စီဝင် ၃၁ ဦးရှိခဲ့ရာ ဦးနု (နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ် Anti-Fascist People's Freedom League ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဦးရာရှစ်၊ ဦးအုန်း၊ ဦးသီဟန်၊ ဦးကျော်ငြိမ်း (နိုင်ငံတော် ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ တရားရေးဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ဖဆပလဌာနချုပ် (တည်မြဲ) ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဦးထွန်းတင်၊ ဦးထွန်းအုံ၊ ဦးလှဖေ (ဗိုလ်လက်ျာ)၊ ဦးဘဆက်၊ သရဲဗအေး၊ ဦးညိုထွန်း၊ ဦးညိုမြ၊ ဦးစိုးမောင်၊ ဒေါ်အမာ (လူထုဒေါ်အမာ)၊ ဒေါ်အုန်း (အမ်အေဒေါ်အုန်း)၊ ဒေါ်မမကြီး၊ ဒေါ်ခင်မြ၊ ဦးလှမောင် (ရမည်းသင်း)၊ တီကေဘွန်း၊ ဦးညွန့်၊ ဦးသန်းတင်၊ ဦးလှခင်မောင်၊ ဦးထွန်းဖေ၊ ဦးအောင်ဆန်း (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) စသော ကျောင်းသားများ ဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏သပိတ်အရေး တင်းမာလျက်ရှိနေစဉ်အတွင်း ၁၉၃၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်တွင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများအစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူကာ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂ (ဗကသ) အဖွဲ့ကို အောင်မြင်စွာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ များမကြာမီ Mr. Sloss နုတ်ထွက်သွားခဲ့ရပြီး မြန်မာလူမျိုး ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးအယူအဆ အမျိုးမျိုးကွဲပြားကြသော်လည်း ခေတ်အဆက်ဆက် တကသနှင့် ဗကသကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တို့၏ တူညီမှုအရည်အချင်းများမှာ ကျောင်းသားလူငယ်ပီပီတက်ကြွခြင်း၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လိုသောစိတ်ဓာတ်ရှိကြခြင်း၊ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ထက်သန်ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၃၀ဝ ပြည့်အရေးတော်ပုံ ၁၉၃၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးဗဟိန်းနှင့်ဦးဗဆွေသည် သခင်ဖိုးလှကြီးဦးဆောင်သော ရေနံမြေ သပိတ်တပ်ဖွဲ့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သည်။ သခင်ထွန်းခင်၏သတင်းပေးချက်အရ သခင်ဖေသန်း၊ သခင်စိုး၊ သခင်ထိန်ဝင်းတို့နှင့်အတူ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော "ကိုဗဟိန်း-ကိုဗဆွေ" နှင့် မြို့မ ရဲရဲတောက် ဦးသန်းတင်တို့သည်လည်း အတက်ကြွဆုံး ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဦးဗဟိန်း၊ ဦးဗဆွေ၊ သခင်ဖေသန်းတို့က ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း ရေနံမြေသပိတ်ကြီးသည် မတရားမှုများကိုငုံ့၍မခံ၊ အပြင်းအထန်တွန်းလှန်၍ မကွေးမှရန်ကုန်သို့ ချီတက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးလျှင်လည်း တစ်ဗိုလ်ဆင်း-တစ်ဗိုလ်တက်စနစ်ဖြင့် ရေနံမြေတပ်ကြီးအား ဆက်လက်ချီတက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟောပြောသည်။ ဦးဗဟိန်းက "မြင်းခွာတစ်ချက်ပေါက်လျှင် မီးဟုန်းဟုန်းတောက်စေရမည်" ဟူသော ရဲရဲတောက်မိန့်ခွန်းပြောဆိုမှုကြောင့် ရေနံမြေအလုပ်သမားများ စိတ်အားတက်ကြွလာကြသည်။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးဗဟိန်း၊ ဦးဗဆွေသာမက သခင်စိုး၊ သခင်ထိန်ဝင်း၊ သခင်ဖေသန်းတို့ကို နယ်ချဲ့အစိုးရမှ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
၁၉၄၂-၄၅ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလတွင်လည်း ဗကသခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော ဦးအောင်ဆန်း (အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း)၊ ဦးနု (နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု)၊ သခင်လှဖေ (ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်လက်ျာ)၊ ဦးလှရွှေ (အာဏာရှင်လှရွှေ)၊ ဦးထွန်းရှိန် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်ဗိုလ်ရန်နိုင်)၊ ဦးလှမောင် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်ဇေယျ)၊ ဦးဗဆွေ (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်)၊ ဦးကျော်ငြိမ်း (ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနှင့် နိုင်ငံတော်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်) စသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များအဖြစ် ထင်ရှားသည်။
၁၉၄၆-၄၈ ခုနှစ် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလများတွင် ဗကသကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော ဦးသန်းထွန်း (သမိုင်းပါမောက္ခ ဒေါက်တာသန်းထွန်း)၊ ဦးသန်း၊ သူရိယဦးသန်းမောင် (မန္တလေးသူရိယသတင်းစာအယ်ဒီတာချုပ်)၊ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် (ဖဆပလ ဌာနချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အတူ ပင်လုံညီလာခံသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သူ)၊ ဦးထွန်းညွန့် စသည်တို့သည် ထင်ရှားခဲ့သည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အထွေထွေသပိတ်ကြီးတွင် သူရိယဦးသန်းမောင်နှင့် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်တို့သည် "ကိုသန်းမောင်-ကိုသန်းကြွယ်" ဟူ၍ ထိုစဉ်က ပူးတွဲထင်ရှားခဲ့သည်။ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်က ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ ရက် ညနေ ၆ နာရီ ၃၃ မိနစ်တွင် အသံလွှင့်ဌာနမှနေ၍ တိုင်းပြည်သို့ အသံလွှင့်ပြောကြားခဲ့သည့် "လမ်းနှစ်ခွ" မိန့်ခွန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ထဲတွင် သိန်း-သန်း ကွန်မြူနစ်ဩဇာခံ ကွန်မြူနစ်အမာခံကျောင်းသားအမှုဆောင်များ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဗကသ၊ တကသ ဥက္ကဋ္ဌ သူရိယဦးသန်းမောင်နှင့် ဗကသ၊ တကသ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်တို့ဦးဆောင်သော ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များက အယုံအကြည်မရှိအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး မဲခွဲရာ ကွန်မြူနစ်ဩဇာခံ ဗကသအဖွဲ့ပြုတ်ကြသွားခဲ့ကြောင်း ထည့်သွင်းချီးကျူးမိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
၁ ဗကသ ဥက္ကဋ္ဌစာရင်း (၁၉၃၆-၁၉၅၉)
၂ ၁၉၈၈ကာလ မှ ယနေ့ခေတ်
ဗကသ ဥက္ကဋ္ဌစာရင်း (၁၉၃၆-၁၉၅၉)ပြင်ဆင်
၁၉၈၈ကာလ မှ ယနေ့ခေတ်ပြင်ဆင်
( ၁၉၈၈ ) ကိုမင်းကိုနိုင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တကသ ရင်ပြင်နီတွင် ကျင်းပသော ဗကသ တရားဝင် ဖြစ်မြောက်ရေးညီလာခံတွင် ဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည်။ ထုိနှစ် ဗကသ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမှာ ကိုမိုးသီးဇွန် ဖြစ်သည်။ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင့် ကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF တည်ထောင်သူ တဦး ဖြစ်ပြီး ၈၈၈၈ လူထုဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကာလတွင် ထင်ရှားသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ ကိုသန့်ဇင် အထက်ဗမာပြည် ဗကသ ဥက္ကဌ ၁၉၈၉ ဗကသ အထက်ဗမာပြည် ညီလာခံတွင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည်။ " ၁၉၈၈ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တကသ ရင်ပြင်နီ နှင့် ၁၉၈၉ ဗကသ အထက်ဗမာပြည် နှစ်ခုလုံးကို ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်၏ သတ္တမအကြိမ်မြောက် ညီလာခံအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ "
( ၂၀၁၂ - ၁၆ ) ကိုကျော်ကိုကို ကေျာင်းသားခေါင်းဆောင်များ ထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ပြီးနောက် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် ဗကသ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ ပြန်လည် ပေါ်ပေါက်လာရေးတွင် အားထုတ် ကြိုးပမ်းခဲ့သော ထင်ရှားသော ဗကသခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်သည်။
( ၂၀၁၉ - ယနေ့အထိ ) ကိုသန့်ညီညီဝင်း အခက်အခဲ အတိုက်အခိုက်များကြားမှ မြင်းခြံမြို့ ဂျုပ္ပင်ရွာဦးကျောင်းတွင် ခေါ်ယူကျင်းပခဲ့သော ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် ၈ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံတွင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည်။ ယနေ့အထိ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုများကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နေရင်း ညီလာခံမှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သော ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့မှ ဗကသတာဝန်များကို ဆက်လက် ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည်။
↑ တင်နိုင်တိုး (၂၀၁၂ စက်တင်ဘာလ). မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားသမဂ္ဂများသမိုင်း (၁၉၃၀ - ၁၉၆၂), ပထမအကြိမ်, တကောင်းစာအုပ်တိုက်, စာမျက်နှာ ၉၉-၁၁၁။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗကသ_ဥက္ကဋ္ဌများ_စာရင်း&oldid=518227" မှ ရယူရန်
၁ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၈:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၈:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။